I-Linux 5.1-rc4: incinci nayo yonke into njengoko kulindelekile | Ubunlog
Kwiveki ephelileyo sishicilele Ekukhutshweni kwenguqulo yeLinux kernel 5.1-rc3 isithi ibinkulu kunesiqhelo, kodwa nokuba oku kuya kulungiswa kwiinguqulelo ezizayo. Khange kuthathe xesha lide ukulinda: I-Linux 5.1-rc4 ilapha kwaye, njengoko uLinus Torvalds esitsho, 'Incinci kune-rc3, ndonwabile ukuthi. Akukho nto inkulu apha, luchungechunge oluncinci lwezinto ezijikelezileyo«.
Utata weLinux ukwathethile oko isahlulo sesithathu sayo yonke into singabaqhubi, ngelixa ezinye zingumxube phakathi kohlaziyo loyilo, uhlaziyo lwenkqubo yefayile, amaxwebhu, isiseko senethiwekhi ... setyhula ukususela kwiveki kaMatshi 31 ukuya ku-Epreli 7. Ngamafutshane, bakwazile ukunciphisa ubungakanani bekernel ngokongeza inani elikhulu lamachaphaza amancinci.
I-Linux 5.1 ilindeleke ngenyanga
Ukukhutshwa ngokusemthethweni kweLinux 5.1 icwangciselwe uMeyi 5, Ngaphandle kokuba kwenzeke into enkulu kakhulu, kwimeko apho iya kulibaziseka ukuya kwi-12 yenyanga enye. Into ebaluleke kakhulu kuya kufuneka yenzeke ukuze ilibaziseke kwenye iveki.
La uninzi lweenguqulelo ezinzileyo ezihlaziyiweyo yiLinux 5.0.7 esinokuyifaka ngesandla okanye ngeUkuu, isixhobo endihlala ndisichaza ukuba kulula ukusisebenzisa ngokusibonisa nge-GUI zonke iinguqulelo ezikhoyo namaqhosha ukuze sikwazi ukwenza naluphi na utshintsho. Ewe kunjalo, nokuba uneUkuu kufuneka ulumke, kuba ngamanye amaxesha ukungangqinelani kunokwenziwa, ngakumbi ukuba asikususi ukufakwa kwangaphambili.
Ubuntu 19.04 izakukhutshwa ngoLwesine weveki ezayoNge-18 ka-Epreli, kwaye akukho thuba lokuba iya kufika nge-v5.1 yeLinux Kernel. Izakufika inenguqulelo phakathi kwe-v5.0 kunye ne-5.0.9, okoko nje kukhutshwa ezinye uhlaziyo phakathi kwangoku kunye ne-18. Ngokwam, ndingabheja kwi-v5.0.5 malunga. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Linux 5.1-rc4: incinci kwaye konke njengoko kulindelwe
Ukuzoba, isicelo esitsha sokuzoba, sifikelela kuguqulelo lwaso oluzinzileyo